Igbo, John: Lesson 069 - Okpara Chineke nime Nna na Nna nime ya (Jọn 10:31-39) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 069 (The Son of God in the Father and the Father in him)
e) Okpara Chineke nime Nna na Nna nime ya (Jọn 10:31-39)
31 Ya mere ndi-Juu were nkume ọzọ itu Ya nkume. 32 Jizos zara ha, si, Mu onwem egosiwo unu ọtutu ezi ihe site na Nnam. Ọ bụ maka ọrụ ndị a ka unu ji nkume tụgbuo m? "33 Ndị Juu zara ya, sị:" Anyị adịghị atụ gị nkume maka ezi ọrụ, kama n'ihi nkwulu; n'ihi na ị bụ mmadụ, mee onwe gị Chineke. "34 Jizọs zara ha, sị: "Ọ bụ na e deghị ya n'iwu unu, sị, 'Asịrị m na unu bụ chi?' 35 Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ha chi, onye okwu Chineke bịarutere (ma Akwụkwọ Nsọ apụghị ịkụ), 36 ị na-ekwu banyere ya Onye Nnam doro nsọ, zite kwa ya n'uwa, si, Gi onwe-gi nēkwulu, n'ihi na M'siri, Mu onwem bu Ọkpara Chineke?
Ndị Juu kpọrọ Jizọs asị dịka o kwuru, "mụ na Nna m bụ otu." Ha mesoro onye akaebe ya onwe ya dika nkwulu ma kwue ike itu ya nkume dika iwu choro, ma obugh iwe Jehova gaadakwasi mba ahu. N'ihi ya, ha gbagara n'ogige ahụ ma jiri nkume bịa tụba ya.
Jizos guzosiri ike n'onu ha, si, "Ihe ojo gini ka m meworo gi?" M meere gi aka, gwo ndi aru gi aru, gwo ndi mo ojo, meghe anya ndi kpuru ìsì, emere m ndi ekpenta ka ha kwusa ozioma nye ndi ogbenye. Achọghị m ịla n'iyi onye ọrụ ebere gị, achọghị m nsọpụrụ ma ọ bụ ego maka ọrụ m, nke m ji obi umeala kpọọ ọrụ Nna m, m nọ ebe a dị ka ohu gị."
Ndị Juu tiri mkpu, sị, "Anyị anaghị atụ gị nkume maka ọrụ ọbụla, kama n'ihi nkwulu gị. I bulie onwe gị n'ọkwá Chineke, mgbe ị na-eguzo n'etiti anyị dịka mmadụ efu. Anyị ga-awụfu ọbara gị iji gosipụta gị ndi mmadu bu ndi nwuru anwu, kedu ka i si ekwu na gi onwe gi bu Chineke, nke gi na onye di nso?
Juputara na ntukwasi obi Jizos zaghachiri, "ç agughi na iwu unu na Chineke n'egosi ndi ozo a hoputara, si, Unu bu chi, unu nile bu umu nke Onye kachasi ihe nile" (Abuoma 82: 6) ndi mmadu nile bu ndi nmehie, ndi na-ejeghari na njehie, ma Chineke kpotara ha "chi na umu" n'ihi aha Ya nke Chineke. O choghi ka unu la n'iyi, kama ka unu we di ndu rue mb͕e ebighi-ebi, laghachikute Chineke-gi, di nsọ dika Ọ di.
"Ya mere, gini mere i ji choro itu m nkume? Chineke n'onwe ya na-akppo gi" chi na umuaka. "Emegh m nmehie dika gi, m di nso n'okwu na n'omume, enwere m ikike ibi ndu ebighi ebi, ezi nwa nke Chineke: gua ihe edere n'iwu gi ma gi onwe gi ga ama m, mana i kwenyeghi n'Akwukwo Nso gi, ma gi amataghi chi m."
"Mu eziteghm onwe m, mana Nna nso ziterem, Mu onwem bu Okpara ya, O bu Nna m, idi nso ya di n'ime m, ya mere mu onwem bu Chineke site na Chineke, onwunwu si n'ìhè, amughi ya, nke kachasi Nna."
Jizos meriri ndi Juu site na akwukwo nso nke aka ha, ma kwusi okwu ha. Ma, anya ha nọgidere na-ajọ njọ na ịkpọasị, ma ha wedara aka ha aka, ebe ọ bụ na Jizọs gosipụtara na Akwụkwọ ha na o nwere ike ịbụ Nwa Chineke n'Agba Ochie n'ozuzu ya na karịsịa tinye ya n'ọrụ.
37 Ọ bụrụ na mụ adịghị arụ ọrụ Nna m, unu ekwerela m. 38 Ma ọ buru na Mu onwem eme ha, ọ bu ezie na unu ekweghi na Mu; ka unu we mara, kwere kwa na Nnam nọ nimem, Mu onwem nọ kwa nime Nnam. 39 Ha we chọ uzọ ijide Ya, O we pua n'aka-ha.
"Nke a pụtara," ka Jizọs kọwara, sị, "I ghaghị ikwere na m, ebe m na-eme ihe Chineke na-eme, ọrụ ọrụ ebere, ọbụbụeze agaghị abụ m ma ọ bụrụ na anaghị m anọchite anya ọmịiko ya, ebe ọ bụ na ịhụnanya Ya dị n'ime m, enwere m ikike iji mezuo ọrụ Chineke, n'ihi na ha bụ n'ezie ọrụ Nna."
"O nwere ike ịbụ na uche gị anaghị ama ụdị mmadụ dị iche iche. Ma, nyochaa ọrụ m, ònye nwere ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ site na okwu ya, ma meghee anya ndị ìsì, ma ọ bụ ka mmiri ozuzo ahụ, ma ọ bụ nye nri nri nke puku mmadụ ise na ụnwụ nri na ogbe achịcha ise na azụ abụọ? Ị na-achọsi Mmụọ Nsọ ike imeghe uche gị ma nụ olu Ya ka i wee mara na Chineke n'onwe Ya nọ n'ime m? Mgbe ị jupụtara na Mmụọ Nsọ, ị ga-anọgide na-enwe ihe ọmụma dị mkpa ma ghọta na zuru oke nke chi bụ n'ime m ahụ."
N'ebe a na tupu ndi mmadu aju nri, Jisos kwuputara okwu ndi di ike, na ya no nime Nna, dika alaka ahu nogide na vine ahu ma nata ike site na nkpọrọ, otua ka Kraist si na Nna bia ma nogide nime ya. Ha abughi ndi ozo, n'udo zuru oke na otu. Ya mere anyi puru ikwu na Okpara ahu zochiri Nna, ikpughe Nna ya ma kwanyere Ya otuto. Ya mere ekpere kachasị amara, "Nna anyị, onye nọ n'eluigwe, ka aha gị bụrụ ihe nsọ."
Onye ọ bụla nke na-atụgharị uche n'ịgba akaebe Jizọs banyere chi ya, n'ekpere na ịsọpụrụ ofufe, ga-aghọta na ọ bụ ihe akaebe doro anya megide nghọta na-enweghị atụ banyere Atọ n'Ime Otu dị nsọ. Ọ bụghị chi atọ dịka ibe ha, kama ịdị n'otu zuru oke na Atọ n'Ime Otu dị nsọ, ya mere ọṅụ na-agba akaebe na Chineke bụ Otu.
Mgbe ndị Juu nụrụ ka Jizọs na-agba akaebe ugboro ugboro banyere mmekọrịta zuru okè ya na Nna ya, ha si n'azụ tụgbuo ya. Ma ha choro ijide ya wee kpoo ya n'ogo ndi ochichi di elu iji choputa echiche ya. Jizọs si n'ebe ha nọ pụọ. O Dighi onye u b la nwere ike imeru nw nwa nke Chineke rue mgbe Nna ha cho ro ha. Jizos siri, Ọ dighi onye ọ bula puru inapu ha n'aka Nnam.
EKPERE: Nna na Nwa Atụrụ Chineke, anyị na-ahụ ịdị n'otu n'ịhụnanya gị. Uche anyi enweghi ike ichota chi di n'ime mmadu. Mmụọ gị emeela ka anyị ghọtakwuo ịhụnanya na ọrụ nzọpụta gị. I mere anyi umu anyi. Nyere anyị aka ido aha gị nsọ na ebumnobi anyị, okwu na omume. Doonụ anyị nsọ ka unu dị nsọ.
Olee otú Jizọs na-akpọsa ya divinite?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)